Ihe ngosi: Mkpokọta Mmekọrịta, Nhazi ihu igwe, Njikere Ahụmịhe Ndị Ọrụ | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 4, 2013 Tọzdee, Ọktoba 3, 2013 Douglas Karr
Anọ m na-achọpụta ihe mepere emepe nke dị jụụ n'ezie ihe ngosi ebe ị nwere ike kpoo HTML na ibe CSS ọnụ na ihe ngosi mmịfe nke na-arụ ọrụ ikpo okwu. Ha na-arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba (ọbụlagodi na-akwado ihuenyo mmetụ aka na ihuenyo zuru oke). A na-echekwa ihe mmịfe ndị ahụ na ntanetị mana enwere ike igosipụta na ntanetị karịa! Ha na Dropbox mekọrịta ma enwere ike ịkekọrịta ka m na-eme n'okpuru!
Nke a bụ ihe dị mma, dị nkenke slide site Jamie Cavanaugh nke ahụ kọwara ọdịiche dị n’etiti Mmekọrịta Mmekọrịta (IxD), Ntinye ihu nke onye ọrụ (UI) na Nwepụta Ahụmịhe Ndị Ọrụ (UX). Ntụnyere nke ọka, nnukwu efere na ngaji si Ed Lea dị nkọ.
Tags: Nwekọrịta mmekọrịtaixdihe ngosiuiNwepụta Ahụmahụ Onye Ọrụnjirimara interface interfaceux
Ọkt 4, 2013 na 1:15 PM
Nanị post, Daalụ